Toamasina: hitory ny kolikolin’ny kaominina ny mpanolotsaina | NewsMada
Toamasina: hitory ny kolikolin’ny kaominina ny mpanolotsaina
Ho tonga amin’ny tsontsori-mamba isarahana ny mpanolotsaina sy ny ben’ny Tanànan’ i Toamasina. Ahiana tsy ho afa-bela amin’ny fivoriana anio ny mpitantana ny kaominina ao an-dRenivohitry ny faritra Atsinanana.
“Hivory izahay amin’ny alakamisy ho avy izao (anio) ka mety hiafara amin’ny
fitsipaham-pitokisana ny ben’ny Tanàna izany. Hametraka fitoriana eny anivon’ny birao miady amin’ny kolikoly koa izahay. Hahaheno vaovao lehibe ianareo amin’ity herinandro ity. Hifanindran-dalana amin’izany fitorianay izany koa ny fitorian’ny orinasa iray sy ny fokonolona momba ny resaka tany“, hoy ireo mpanolotsain’ny Tanàna raha nitafa tamin’ny mpanao gazety, afakomaly.
Ankoatra izany, tonga naneho ny tsy fahafaliana teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna ihany koa, ny talata, teo ireo fokonolona avy ao amin’ny fokontany Salazamay Avaratra 14/21, mampiasa ilay lalana ao an-toerana namidin’ny kaominina amin’olon-tsotra koa ary nofefen’ilay nividy azy ny lalana ho an’ny rehetra izany. Tezitra, noho izany, izy ireo ka nilanja sora-baventy nitaky fialan’ny ben’ny Tanàna, Ratsiraka Elysée.
Tsy mendrika ho ben’ny Tanàna intsony
Nanamafy izany koa ny depiote teo aloha, i Famindra Justin, any an-toerana fa tsy mendrika ny ho ben’ny Tanàna hitantana ny kaominina intsony izy. Nohitrikitrihin’ireo mpanolotsaina fa tapitra namidiny miaraka amin’ireo mpiandany aminy ny fananam-bahoaka sy ny fitaovam-panjakana, ankoatra ireo lalam-bahoaka sy ny tanim-panjakana. Efa lafo koa ny “Residence” an’ny fiadidiana ny Tanàna etsy Ambohijafy. Manampy ireo ny karaman’ny mpiasan’ny kaominina tsy voaloa, ny fiakaran’ny haban-tsena…
Araka izany, tantara mitohy sy andrasan’ny maro ity fivorian’ny mpanolotsain’ny kaominina Toamasina ity.